Statement by the UN Resident and Humanitarian Coordinator ai in Myanmar Knut Ostby on the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia
Eleven UN agencies and Embassies are flying the rainbow flag today in support of diversity and inclusion for lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons (LGBTI) in Myanmar on the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia.
This day marks the decision of the World Health Organization to declassify homosexuality asamental disorder on 17 May 1990.
Since then, we have seen encouraging progress worldwide. Almost 40 countries now legally recognize same-sex couples. Some are looking at making it easier for transgender people to have their gender legally recognized.
However, the progress is not even. Discrimination persists in many countries on grounds of sexual orientation and LGBTI people face stigma, violence and human rights abuse.
Myanmar, like many countries in the region, has old colonial laws criminalizing same-sex relations. While these are rarely enforced, they nevertheless contribute toahostile environment for LGBTI people.
As Myanmar transforms in so many ways, it is time to change this.
The leaders of all countries – including Myanmar – have unanimously reaffirmed their commitment ending poverty and human rights discrimination by adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development.
The 17 sustainable development goals are based onasingle, guiding principle: to leave no one behind.
That includes LGBTI people who can make great contribution to society when their rights are respected.
They havearight to enjoy life that feels free, and where love can be found without prejudice and discrimination.
The United Nations is committed to support the Government of Myanmar in designing policies and programmes that will ensure human rights for all people regardless of their sexual orientation and gender identity.
လိင်တူဆက်ဆံသူများအား ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှု (Homophobia)၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်နေထိုင်သူများအား ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှု (Transphobia)နှင့်၊ လိင်တူ/လိင်ကွဲ ဆက်ဆံသူများအား ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှု (Biphobia) များအား ဆန့်ကျင်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နေ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ယာယီ ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ ယာယီ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Knut Ostby မှ ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ။
၂၀၁၈ခု၊မေလ ၁၇ ရက်၊
ယနေ့တွင်ကျရောက်သော၊ လိင်တူဆက်ဆံသူများအား ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ ဝတ်ဆင် နေထိုင်သူများအားကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှုနှင့်၊ လိင်တူ/လိင်ကွဲဆက်ဆံသူများအားကြောက်ရွံ့ မုန်းတီးမှုများအား ဆန့်ကျင်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြသော၊ အမျိုးသား အချင်းချင်းလိင်တူချစ်သူ၊ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းလိင်တူချစ်သူ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်နေထိုင် သူနှင့်ကျား/မလိင်အင်္ဂါ နှစ်မျိုး စလုံး ပါရှိသူများ (LGBTI) ၏ - မတူညီကွဲပြားမှုနှင့် နေရာတိုင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိမှု ကိုထောက်ခံသောအားဖြင့်၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ ၁၁ခုနှင့်၊ သံရုံးများတွင် သက်တံ့ရောင်စဉ် အလံများ လွှင့်ထူကြမည်။
ယနေ့သည် ၁၉၉၀ခု၊ မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ၊ လိင်တူဆက်ဆံမှုကို စိတ်မကျန်းမာမှု ရောဂါစာရင်းမှ ပါယ်ဖျက်လိုက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်အချိန်မှစ၍၊ ကမ္ဘာ့တလွှမ်းတွင်အားရဖွယ်ရာ တိုးတက်မှုများမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ခန့်တွင်လိင်တူစုံတွဲများကို တရားဝင်လက်ခံအသိအမှတ်ပြုလာကြသည်။ တချို့နိုင်ငံများတွင်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်နေထိုင်သူများအား၊ ၎င်းတို့နှစ်သက်ရာ လိင်အမျိုးအစားအတိုင်း လွယ်တလင့်တကူတရားဝင် အသိအမှတ် ပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းများရှာနေကြသည်။
သို့သော်လည်း ညီညီမျှမျှတိုးတက်ခြင်းတော့မဟုတ်ပေ။ နိုင်ငံအတော်များများတွင်၊ လိင်ဦးစားပေးမှုအပေါ် အခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိနေသည့်အတွက်၊ LGBTI များအနေနှင့်၊ နံမည်ဆိုး တပ်ခံရမှု၊ အကြမ်းဖက်ခံရမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း၊ ဒေသတွင်းရှိ အခြားသောနိုင်ငံများမှာကဲ့သို့ပင်၊ လိင်တူဆက်ဆံမှုများကို ရာဇဝတ်
ကြောင်း အရအရေးယူနိုင်သည့် ခေတ်ဆွေးကိုလိုနီ ဥပဒေများတည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့်၊ ယခုကိစ္စများကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အချိန် ကျရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် နှလုံးသွင်းထားသော၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လူသားအားလုံးခံစားခွင့် ရှိရမည် ဟူသည့်အခြေခံမူကို ၊ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးကလက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၂၀၃၀ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို အတည်ပြု ချမှတ် ခြင်းဖြင့်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုများ ပပျောက်သွားစေရန် ၊မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအားလုံးက ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်၏ဦးတည်ချက် ၁၇ ရပ်သည် - မည်သူတဦး တယောက် ကိုမျှချန်မထားခဲ့ရေး - ဟူသည့်၊ တခုတည်းသော လမ်းညွှန်ချက်မူဘောင် အပေါ် အခြေခံ ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် LGBTI များသည်လည်း ထို လမ်းညွှန်ချက်မူဘောင်များနှင့် အကျွမ်းဝင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကို အလေးထားလေးစားမည်ဆိုပါက၊ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို များစွာအကျိုး ပြုနိုင်သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လည်း၊ မလိုမုန်းထားမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုများ ကင်းရှင်းစွာဖြင့် အချစ်ကိုရှာဖွေကာဘဝ၏ အရသာကိုလွပ်လပ်စွာ ခံစားခွင့်ရှိကြသူများဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအနေနှင့်၊ လိင်ဦးစားပေးမှု၊ ကျား/မဖြစ်တည်မှုများအပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိပဲ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ရရှိခံစားနိုင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ မူဝါဒများ ချမှတ်ရာ တွင်လည်းကောင်း ၊မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအားပံ့ပို့းကူညီရန်သံဓိဌါန်ချထားပြီးဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် - Stanislav Saling, ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ stanislav.saling@one.un.org +95 (0)942 651 9871
Download PDF version - ENG & MYA